China Polyquaternium-10 mveliso kunye nabenzi | Y & R
IPolyquaternium-10 yityuwa ye-quaternary ammonium yetyuwa yehydroxyethyl cellulose. Yeyona arhente anti-static, ifilimu yangaphambili kunye nokulungiswa. Isetyenziswa ngokubanzi kuyo yonke imveliso yokulungisa iinwele. I-Polyquaternium-10 ihlelwa njenge-Antistatic kunye ne-Arhente yokuQalwa kweFilimu.
Igama lemveliso: IPolyquaternium-10
Ikhowudi yemveliso: YNR-PQ10
Izithethantonye: I-PQ-10, iPolyquaternium 10
Igama le-INCI: IPolyquaternium-10
Inombolo ye-CAS: 68610-92-4
Umsebenzi: Ummeli wokwenza iAntistatic kunye neFilimu
IPolyquaternium-10 ine-conditioning egqwesileyo, i-antistatic, ukusebenza, ukulungisa iinwele ezonakeleyo, ukwenza iinwele zithambe, zigude kwaye zibhetyebhetye.IPolyquaternium-10yipolymer ye-cationic enyibilikayo yamanzi ehambelana nazo zonke iintlobo ze-surfactant. Ngokusebenza kakuhle kokuqina, i-antistatic, imeko, ukuthambisa, inokulungisa iinwele ezonakeleyo, kwaye inyuse ukudibanisa kunye nokuthambisa kwiinwele, kunye nokunciphisa ukucaphuka okubangelwa zii-surfactants, ukulungisa ukuzikhusela kwesikhumba, ukuhambisa ulusu oluthambisayo noluthambileyo.
Inkangeleko Powder emthubi
i-pH (25 ℃, 2% yeSoln yaManzi.) 5.0 ~ 7.0
Ukuphulukana nokomisa 6.0% ubuninzi.
Viscosity (25 ℃, 2% Soln.) 300 ~ 500 cps
Umxholo weNitrogen 1.50 ~ 2.20%
pH (25 ℃, 1% Soln yaManzi.) 5.0 ~ 7.0
I-viscosis (25 ℃, 1% yeSoln.) I-1,000 ~ 2,500 cps
I-Polyquaternium-10 yinto enamandla, enyibilikayo yamanzi eshiya iinwele nolusu ngokuthamba okungapheliyo kunye ne-hydration.IPolyquaternium-10 yicationic, isinyibilikisi esinyibilikayo esetyenziswa rhoqo kwiishampu nakwimeko yokuhlamba umzimba. Ingasetyenziselwa ukomeleza iinwele ezonakalisiweyo kwaye iyahambelana noluhlu olubanzi lwee-surfactants. I-Polyquaternium-10 yeyona cationic ilungileyo yokufaka iinwele nolusu. Iluncedo ngakumbi kwiinkqubo ezisekwe kumatshini ezinjengeshampu kunye nejeli yeshawa kwaye ilungele ukusetyenziswa kwisitshizi, ukushiya kwizilungisi zeenwele. IPolyquaternium-10 sisixhobo esihle kakhulu sokulungisa izixhobo kwaye sinika isiliphu sokwenza lula ukudibanisa amanzi. Ukongeza iya kongeza ukuthamba kwaye ikhanye kwiinwele ezomileyo. Amaxesha amaninzi adityaniswa kwinqanaba leoyile.
* Imeko zokupholisa
* Abaxhasi bamanzi
Egqithileyo IHeratin enehydrolyzed
Umzi mveliso wePolyquaternium-10